My World: June 2014
ကမ္ဘာပေါ်က အလှဆုံး ရေပန်းများ
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, June 25, 2014 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
Waterfront Park (Charleston)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ် ချားလ်စတန်ဒေသ ကူးပါးမြစ်အနီး ခန့်မှန်း မိုင်ဝက်ရှည်ပြီး၁၂ဧက ရှိ (5 ha)မြေနေရာမှာ တီထွင် ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ နာနတ်သီးပုံ ရေပန်းပါ။၂၀၀၇ခုနှစ်က Landmark Award ဆုကို လက်ခံရရှိခဲ့သတဲ့။American Society of Landscape Architects အဖွဲ့နဲ့ National Trust for Historic Preservation အဖွဲ့ တို့က ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ ဒီဇိုင်းလက်ရာ တို့ကြောင့် ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ှSasaki Associates အဖွဲ့က စတူးအတ် အို ဒေါ်ဆန်ရဲ့ လက်ရာပါတဲ့။ ၁၉၈၉ခုနှစ် ဟာရီကိန်း ဟူးဂိုး ကြောင့် ဒေါ်လာတသန်းဖိုးလောက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး နောက် ၁၉၉၀ခုနှစ် မေလ ၁၁ရက်နေ့မှာ ဖွင့်ပွဲလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
"မှို" မခိုတွယ်အောင် ဘယ်လိုဆောင်၊ ဘာတွေရှောင်
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, June 25, 2014 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
"mushroom" လို့ဆိုတဲ့ စားသုံးလို့ရတဲ့မှိုတွေရဲ့ အရသာချိုချိုကို လူတိုင်းနီးပါးနှစ်သက်ကြပေမယ့် "mold" (mould) ဆိုတဲ့ မှိုကတော့ဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ကြီးလှပါတယ်။ ရှောင်ကြဉ်ရလေ့ရှိတယ်။ အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ မှိုတွေရဲ့ အဓိကပစ်မှတ်က ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့မှု နဲ့ စိုထိုင်းမှုကြည်ရှည်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာတွေကိုပါ။ အိမ်တွေမှာ မှိုပြဿနာကြုံရပြီဆို ချက်ချင်းဆေးကြောသန့်ရှင်းပစ်ရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ရေစိမ့်ကျနေတဲ့နေရာကို ပြုပြင်ရမှာပါ။ ရေကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့ ရေစပ်စပ်နေရာ၊တွေနဲ့ ပစ္စည်းပစ္စယတွေကို ခြောက်သွေ့စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ၂၄ နာရီကနေ ၄၈နာရီအတွင်း မှိုစတင်တွယ်ကပ်ကြီးထွားတတ်ပါတယ်။ မှိုတွေဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ အပြင်ဘက်တွေမှာ သစ်ရွက်ကြွေနဲ့ သေဆုံးနေတဲ့သစ်ပင်တွေလို သဘာဝမြေသြဇာကုန်ဆုံးသွားတဲ့နေရာမှာ မှိုတွေ သဘာဝအတိုင်းပေါက်ပွားတတ်ကြတယ်။ အိမ်အတွင်းဘက်တွေမှာတော့ မှိုကြီးထွားမှုဟာ ရှောင်ကြဉ်ဖယ်ရှားသင့်တဲ့အရာပါ။
ရာသီဥတုတစ်မျိုးကနေ တစ်မျိုး အကူးအပြောင်းကာလမှာ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက အစိတ်အပိုင်းလေးတွေ အလိုက်သင့်မပြောင်းလဲနိုင်ဘဲ လူမှာမအီမသာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မိုးရာသီဟာ ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်မှာ ရှိနေတဲ့သက်ရှိအားလုံးကို ပြန်လည်နုပျိုစေတဲ့ ရာသီဥတုလို့တော့ဆိုကြတယ်။ နွေရာသီကာလပြင်းလှတဲ့အပူတွေ လွတ်မြောက်သွားစေမယ့်မိုးရေစက်တွေကို လူတိုင်းကြိုဆိုချင်ကြပါတယ်။ မုတ်သုံရာသီဟာ တချို့ ကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်ပူစရာအခြေအနေလေးတွေလည်း သယ်ဆောင်လာတတ်သေးတာကိုတော့ သတိပြုကြရမှာပါ။ မုတ်သုံမိုးနဲ့အတူ အစာအဆိပ်သင့်၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ ဝမ်းကိုက်နဲ့ ကာလဝမ်းရောဂါလို ရောဂါတွေရောယောင်ပါဝင်လာတတ်ကြတယ်။ စိုထိုင်းမှုကလည်း လေထုထဲမှာ အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ အစာခြေဖျက်တဲ့စနစ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုက အနိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေပါသတဲ့။ မိုးရာသီမှာ အစာခြေဖျက်ခြင်းအားနည်းပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အစားအစာကို နည်းနည်းလျှော့စားပေးတာ သင့်တော်ပါတယ်။
အာလူး၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ပဲတောင့်ရှည်သီး၊ ရုံးပတီသီး၊ ပဲစင်းငုံ၊ ဗိုလ်စားပဲသီး တို့ မစားသင့်ပါဘူး။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ အသီးအနှံအားလုံးကို ဂရုတစိုက်ဆေးကြောပြီးမှ စားသင့်ပါတယ်။ မိုးရာသီမှာ ပိုးကောင်တွေပိုပြီးပါဝင်တတ်ပြီး အညစ်အကြေးပိုနေတတ်တာကြောင့်ပါ။ ဆားငံလွန်းတဲ့အစားအစာတွေဟာ ဗိုက်ထဲမှာ ရေဓာတ်ကြာကြာရှိနေပြီး လေပွသလို ဗိုက်ကယ်တာဖြစ်တတ်တာကြောင့်လည်း ဆားအသင့်အတင့် ဒါမှမဟုတ် အငံဓာတ်နည်းပါးတဲ့ အစားအစာသာ စားသင့်ပါတယ်။ ချဉ်လွန်းတဲ့အစားအစာ မန်ကျည်းသီးနဲ့ ချပ်တနီး၊ ဆားစိမ်/ အချဉ်တည်ထားတဲ့ အစားမျိုးတွေ မစားသင့်လှဘူး။ အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ အစာခြေဖျက်ဖို့ အားစိုက်ရလွန်းတဲ့ အစားအစာတွေရှောင်ပေးဖို့ပါပဲ။
ခြောက်သွေ့တဲ့သဘာဝရှိတဲ့ အစားအစာ ဥပမာ ပြောင်းဖူး၊ ကုလားပဲ၊ မြင်းစားဂျုံတွေ စားသင့်ပါတယ်။ ဆန်ဟောင်း၊ ဂျုံ/ ပြောင်း၊ မုယောစပါး၊ ပဲနီလေး (ပဲဝါ လည်းအတူတူပါပဲ)၊ ဒိန်ခဲ၊ စပျစ်ဝိုင်၊ ပျားရည်တို့လည်း သင့်တော်ပါတယ်။ ရေဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ ဖရဲသီး၊ သခွားမွှေးသီးတို့လို ကိုယ်ခန္ဓာကစုပ်ယူနိုင်စွမ်းများတဲ့ အသီးအနှံတွေလည်း စားသုံးသင့်တဲ့အစားအစာပါပဲ။ နောက်တစ်ခု ရာသီစာလို့တောင် ပြောနိုင်တာက နွားနို့ပါ။ နွားနို့နဲ့ buttermilk ကိုလည်း အစာခြေဖျက်နှုန်းကောင်းစေတာကြောင့် သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ အသီးအနှံ၊ အစေ့အနှံ၊ ကွေကာတို့လို အစားအစာ များများစားသင့်ပြီး အသားနဲ့ ငါးတွေ သိပ်မစားတာကောင်းပါတယ်။ အဆီဓာတ်နည်းပါးတဲ့ အကင်၊ နံပြားဖိုမှာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ မုန့်တွေစားတာလည်း သင့်တော်လှတယ်။ ငရုတ်ကောင်း၊ ဂျင်း နဲ့ ပူစီနံ၊ နနွင်းတို့လို ရောဂါကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပြီး အစာခြေဖျက်နှုန်းကောင်းတဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့ ထမင်းဝိုင်းလေးကို ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။
မိုးရာသီမှာ အရေပြားခြောက်သွေ့တတ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိုးရာသီမှာတော့ ဆောင်းရာသီလောက် အသားအရေဟာ ထူးကဲပြီးမခြောက်သွေ့လှပါဘူး။ အရေးကြီးတာကတော့ မိုးရာသီမှာ တချို့နေရာဒေသတွေ ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားကြတယ်။ အဲဒီနေရာတွေမှာ ရေဟာ ညစ်ညမ်းနေတတ်ပါတယ်။ မသန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုင်မိတိုင်း ပိုးသတ်ထားတဲ့ရေ နဲ့ ဆပ်ပြာသုံးပြီး လက်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မကြာခဏလက်ဆေးရတာကြောင့်မို့ လက်အရေပြားပွန်းပဲ့ခြင်း မဖြစ်နိုင်အောင် အပျော့စားဆပ်ပြာမျိုးကိုပဲ သုံးသင့်ပါတယ်။
ဂရုစိုက်ပေးရမှာကတော့ ချည်သားအဝတ်အစားတွေပဲ ဝတ်ဆင်သင့်ပေးဖို့ပါ။ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချည်နှောင်ထားတဲ့အဝတ်အစာ့းဖြစ်မနေဖို့လည်း အရေးကြီးလှတယ်။ မှိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ anti-fungal ကိုယ်လိမ်းပေါင်ဒါကို မှိုတွယ်ကပ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ လိမ်းပေးသင့်ပါတယ်။ ချက်ချင်းခြောက်သွေ့ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ဂျင်းန်ထည်တွေ မဝတ်ပါနဲ့။ ဆီးချို၊ လေးဘက်နာရှိသူတွေအတွက် ထူးဂရုပြုသင့်တာက ခြေထောက်တွေ နွေးထွေးနေစေဖို့ပါ။ ခြေဗလာကျင်းပြီး မလျှောက်ပါနဲ့။ စိုထိုင်းတဲ့ရှုးဖိနိပ်မစီးဘဲ ရေစိမ့်ဝင်မှုမရှိတဲ့ဖိနပ် ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ရေလွှမ်းမိုးခဲ့ပြီး ရေဝပ်ရေအိုင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ခြင်တွေ အမြောက်အများပေါက်ပွားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီရေဝပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာ ရေအမြန်ဆုံးစီးဆင်းစေဖို့နဲ့ ရေတွေခြောက်သွေ့သွားစေဖို့ ကြိုးစားကြရမှာပါ။ ကားတာယာဟောင်းတွေ၊ ပန်းအိုးတွေထဲက ရေတွေကိုလည်းစစ်ဆေးရှင်းလင်းသင့်ပါတယ်။ သင့်တော်တဲ့ အင်းဆက်ကာကွယ်လိမ်းဆေး ကိုယ်မှာလိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ငှက်ဖျား နဲ့ အသားဝါရောဂါတွေဟာ ရေသေရေပုပ်တွေ နဲ့ ညစ်ညမ်းနေတဲ့အစားအစာတွေကနေ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ ရေသေရှိတဲ့နေရာ၊ ခြင်တွေများများစားစားပေါက်ပွားနေတဲ့နေရာမျိုးမှာ နေထိုင်ရရင် ခြင်မကိုက်စေတဲ့လိမ်းဆေး၊ ကရင်မ် နဲ့ ခြင်ထောင် ဂရုတစိုက်အသုံးပြုပေးပါ။
လေကျင့်ခန်းပြုလုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ သွက်သွက်လက်လက်ဖြစ်စေဖို့၊ ကျစ်လစ်ပြီးကျန်းမာနေစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းအကူအညီ ယူရပါဦးမယ်။ မိုးရေစက်တွေပြေးလွှားနေတဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ အပြေးလေ့ကျင့်ခန်း နဲ့ တခြားလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အိမ်တွင်းမှာလည်းပဲ ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကြလေ့ကျင့်ခန်းတွေ မပျက်မကွက်ပြုလုပ်ပေးပါ။ အဲဒါကလည်း မိုးရာသီလေးထဲမှာ ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေနိုင်မယ့် အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ။
Living Fashion Magazine, July, 2014
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 24, 2014 Labels: Myanmar Knowledge Society, နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်း
Myanmar Knowledge Society (MKS)နဲ့ ရေးဖြစ်တဲ့ စာတစ်အုပ်ပါ။ ကျမ ရေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းက တာဝန်မယူတဲ့ “အာဏာယူခြင်း”
(တာဝန်ယူမှုမလိုအပ်တဲ့ အာဏာ) ပါ။
MKS ရဲ့ Facebook မှာတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဒီလိုညွှန်းထားပါတယ်။
"ယခုစာအုပ်ပါအကြောင်းအရာများမှ နိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကို ခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် လူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ လူမျိုးစုနဲ့ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ၊ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုနဲ့ အိုင်ဒီယိုလိုဂျီိဆိုင်ရာ ပြသနာတွေကို မပေါ်ပေါက်အောင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးကို အာမခံနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရှုထောင့်က တင်ပြထားတာဖြစ်တယ်။"
(ယခု စာအုပ်ပါ အမြင်တွေမှာ အမျိုးသားနိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်း(၀ါ) အမျိုးသားရေး တည်ဆောက်ခြင်းဘက်ကနေ ကြည့်ရှုထားတာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ခြင်းState-building ဘက်ကနေ ကြည့်ထားခြင်းသာလျှင် ဖြစ်တယ်။အမျိုးသားရေးတည်ဆောက်ခြင်း(၀ါ)လူမျိုးစုပဋိပက္ခနဲ့ လူမျိုးစုတွေအပေါ် အားမျှခြေတည်ဆောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ရပ်တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားနိုင်ငံတည်ဆောက်ခြင်း nation-buildingသဘောထက် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို ခိုင်မာအောင် တည်ဆောက်ပေးခြင်းအားဖြင့် လူမျိုးစု လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး လူမျိုးစုနဲ့ဘာသာရေးပဋိပက္ခ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုနဲ့ အိုင်ဒီယိုလိုဂျီဆိုင်ရာ အရေးတွေကို မပေါ်ပေါက် အောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လုံခြုံရေးကိုလည်း အာမခံပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အမြင်ကနေ ကြည့်ရှုထားတာ ဖြစ်တယ်။)
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 24, 2014 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
Living Fashion Magazine, June, 2014
နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးသွားအတွက်ပြင်ဆင်နေပြီဆိုရင် ဒေသခံတွေကြိုက်နှစ်သက်မှုမရှိနိုင်တဲ့ ယေဘူယျစည်းကမ်းလေးတွေ သိထားနိုင်ရင်ပိုကောင်းမှာပါ။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာ ဒီအပြုအမူလေးတွေ မပြုလုပ်မိအောင် တတ်နိုင်သမျှဆင်ခြင်သင့်ပါတယ် တဲ့။
ဂျပန်မှာ ဘောက်ဆူး မပေးပါနဲ့
စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ ဟိုတယ်တွေမှာ tip money ပေးတဲ့ အလေ့အထဟာ တွင်ကျယ်နေကြပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ ခြွင်းချက်ပါ။ tip money မပေးကြပါဘူး။ အဲဒါဟာ အရှက်ရစေတယ်။ နှိမ်တယ်လို့ ထင်မြင်ယူဆတာကြောင့်ပါ။
ရုရှားနိုင်ငံရောက်ခဲ့ရင် လူစိမ်းတွေကို ပြုံးမပြပါနဲ့။ သူတို့မြင်ကြတာက အပြုံးဟာ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုအဖြစ်ပါ။ စစ်မှန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းကိုမှ ရည်ညွှန်းပြုံးပြနှုတ်ဆက်လေ့ရှိတာကြောင့် မသိတဲ့ လူစိမ်းတစ်ယောက်ကို ပြုံးပြနေမယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ရိုးသားတည်ကြည်မှုမရှိဘူးလို့ သူတို့က ဆုံးဖြတ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုမှာ ဘယ်လက်ဟာ သန့်ရှင်းမှုမရှိဘူးလို့ ယူဆကြတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို နှုတ်ဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ ကောက်ယူကိုင်တွယ်တာကအစ သင့်ရဲ့ ညာဘက်လက်ကိုပဲ သတိထားပြီးအသုံးပြုပေးပါ။
တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင် ပန်းကန်ထဲမှာ အကုန်အစင်မစားလိုက်ပါနဲ့
ကိုယ့်ပန်းကန်ထဲရှိသမျှအစားအစာကို ပြောင်စင်အောင်စားလိုက်တယ်ဆိုရင် သင့်ကို ဧည့်ခံတဲ့ မိတ်ဆွေဟာ သူ လုံလုံလောက်လောက် မကျွေးနိုင်ခဲ့လို့။ ဒါမှမဟုတ် ထပ်ပြီးဖြည့်မပေးလိုက်လို့ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပြသတာလို့ ထင်မြင်သွားနိုင်တယ်။ ပန်းကန်ထဲမှာ နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် ချန်ထားလိုက်မယ်။ စားပြီးတဲ့အခါ လေချဉ်တက်လိုက်တာဟာ စားဖိုးမှုးကို ချီးမွန်းမှုအဖြစ် အဆင်ပြေတဲ့အပြုအမူဖြစ်လို့နေပါတယ်။
အရေးပေါ်ကိစ္စတွေမှသာ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ တကယ်လို့များ ကားဟွန်းတီးမိခဲ့ရင်တော့ မလိုအပ်တဲ့ အဲဒီ ကားဟွန်း တတီတီမြည်သံကြောင့် တခြားကားမောင်းသူတွေ ထိတ်ထိတ်ပျာပျာဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
Bonjour madame, monsieur ဆိုတဲ့ စကားလေးဟာ အမြဲတမ်းပဲ ပထမဆုံးပြောလိုက်ရမယ့် စကားဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီ ဟယ်လို စကားလုံးလေးနဲ့ စပြီးနှုတ်မဆက်ခဲ့ဖူးဆိုရင် သင်ဟာ တစ်ဖက်သားကို မတူမတန်သလို နှိမ့်ချ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဂျာမနီမှာ ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲ လက်နှိုက်ပြီး စကားစမြည်မပြောပါနဲ့
ဂျာမန်တွေဟာ အဲဒီအပြုအမူကို ရိုင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ စားသောက်တဲ့အခါမှာလည်း ဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့ အညီဆိုရင် သင့်ရဲ့ လက်တွေကို စားပွဲပေါ်ထင်ထားရမှာပါ။ ပေါင်းပေါ်မှာဖွက်သိမ်းထားတာထက် စားပွဲပေါ်ပဲ တင်ထားတာ ယဉ်ကျေးတဲ့အပြုအမူလို့ ဆိုတယ်။ ။
Source : Rude! What You Should Never Do in Other Countries By Taylor Shea | Reader's Digest
ကျောက်ဆည်မြို့ က ရိုးရာ ဆင်ပွဲတော်
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 24, 2014 Labels: ဖြိုးဖြိုးဖတ်ဖို့
ကျောက်ဆည်မြို့ဟာ မန္တလေးနဲ့ ဆိုရင် မိုင် ၃၀ပဲ ကွာလှမ်းပါတယ်။ မြို့အ၀င်မှာတော့ မြန်မာမှု မြန်မာ့ဟန် သွန်းထုထားတဲ့ ရုပ်ကြွ ဆင်ကြီးနှစ်ကောင်က လှိုက်လှဲစွာ ဆီးကြိုနေမှာ ဖြစ်တယ်။တချို့ က ကျောက်ဆည်ကို ဆင်မြို့တော်လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာပါ။
ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်ဒေသမှာမှ ဒီလို ဆင်ပွဲတော်မျိုး မရှိပါဘူး။ ဆင်ပွဲတော်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို နည်းနည်းပြောပြဖို့ ဆိုရင် အနော်ရထာ ဘုရင် ခေတ်ကို ပြန်သွားရပါလိမ့်မယ်။ အနော်ရထာဘုရင် ဟာ လယ်တွင်းကိုးခရိုင် ဆည်မြောင်း ချောင်းကန်တွေ တူးဖေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိမှာပါ။သီဟိုရ်ဘုရင့်ထံမှလည်း စွယ်တော်တဆူ ဆင်ဖြူတော်နှင့် ပင့်ဆောင်ခဲ့သေးတာပါ။ အဲလို ပင့်ဆောင်ရာမှာ ဘုရင်က အဓိဌာန်နဲ့ဆင်ဖြူတော်ကို လွှတ်ပါတယ်။ ဆင်ဖြူတော်ဝပ်ရာ ဌာန နှစ်ခုမှာ ဘုရားစေတီ တဆူစီ တည်ပါတယ်။သာလျောင်းတောင် ဆင် ၀ပ်ရာကို ရွှေသာလျောင်းဘုရားဆိုတာ တည်ထားကိုးကွယ်လျက် ခုတိုင် ထင်ရှား တည်ရှိနေပါတယ်။ ဆင်ကမယ့်သများဟာ မကမီ ရွှေသာလျောင်းဘုရားကို လက်ရာရစ် သုံးကြိမ် ဦးတိုက် ကံတော့ကြရပါတယ် တဲ့။
အနော်ရထာမင်းကြီးဟာ သီတင်းကျွတ်လဆန်း၁၄ရက်နဲ့ လပြည့်နေ့များမှာ ရွှေဆင် ငွေဆင်အရုပ်နဲ့ တကွ လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ကို ဆင်ပေါ်မှာ တင်ပြီး လှည့်လည် လှူဒါန်းစေပါတယ်။ဒါ့ကြောင့်လည်း ဆင်လှူပွဲတော်လို့ ခေါ်တာပါ။လှည့်လည်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက လူတို့ ကြည်ညိုစေရန် သာဓုခေါ်ယူနိုင်စေရန် ဖြစ်ပါသတဲ့။အနော်ရထာခေတ်ကတည်းက ခုချိန်ထိ ဆင်လှူပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ တဖြည်းဖြည်း နားရွက် လှုပ်တဲ့ ဆင် ဦးခေါင်းလှုပ်တဲ့ဆင် များကို တီထွင်လာရာက လူပါ ၀င်ကနိုင်တဲ့ ဆင်ကြီးများကို ၀ါးနှင့် ခွေ ရစ်ပြီး ဆန်းသစ် တီထွင် လာကြတယ်။ ကျောက်ဆည်သား ဆရာငယ် တီထွင်လိုက်တဲ့ “နွဲ့ဆိုး" ဆင်ဟာ အလွန်နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူ က လိုက်ရင် နွဲ့တဲ့တဲ့ ဆိုးတိုးတိုး မို့ လူတွေ ကြည့်လို့ မရိုး နိုင် ကြည့်မ၀ ရှုမ၀နိုင်ကြပါဘူး တဲ့။
ဆင်ရုပ်ကြီးထဲကို ရှေ့တယောက် နောက်တယောက် လူဝင် ကကြရတာပါ။ အဲလို ကတဲ့အခါ ရိုးရာ ဆင်အက ၊ ဘော်ကြယ်အက၊ ဆင်ကလေးအက ရယ်လို့ သုံးမျိုးရှိပါတယ်။
ဆင်ကတဲ့အခါ အစဉ်အလာအရ ဆိုရင် ပထမ ဘုရားကံတော့ခန်း။ ဆင်ဖမ်းခန်း။အယိုင် အကခန်း ရယ်လို့ ပိုင်းခြားနိုင်ပါသေးတယ်။အဲလိုမျိုး ကတဲ့အခါ မြန်မာ့တူရိယာ ပစ္စည်းတွေကိုသာ သုံးစွဲ တီးမှုတ်ကြပါတယ်။မောင်း။ ဒိုး။နှဲ။ လင်ကွင်း။ ၀ါးလက်ခုပ်။ အိုးစည် စတဲ့ တူရိယာများနဲ့ ဇတ်ကွက် ဇတ်လမ်းဆင် ကကြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အလွန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲပါ။ အနော်ရထာ ခေတ်ကနေ ရေတွက်ကြည့်ရင် နှစ်၉၀၀ ကျော် ကြာမြင့်လာသည့်တိုင် မရိုးနိုင်ပဲ ယနေ့တိုင် ခေတ်စားနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ပိုလို့ ပိုလို့ ခေတ်စားလာတယ် လို့တောင် ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလို ရိုးရာမပျက် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြင့် အနော်ရထာ မင်းကြီးကို ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ရာရောက်ပြီး စပါးဆန်ရေ ပေါများကြွယ်ဝစေတယ်လို့ ကျောက်ဆည်သားတို့က အယူ ရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာလှည့် နိုင်ငံခြားသားများအကြိုက် ပွဲတော်တခု ဖြစ်မယ် ဆိုတာလည်း သေချာပြောရဲပါတယ်။
ကိုးကား မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ။အောက်တိုဘာလ ၇ရက်၊ တနင်္လာနေ့ ၊ ၂၀၁၃
Posted by PhyoPhyo at Monday, June 23, 2014 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု မီချီကန်နယ် ပို့အော်စတင်ဒေသအနီး မှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ရှုခင်းကလေးပေါ့။နတ်များဖန်ဆင်းထားတာထက်တောင် ပိုမယ်ထင်ပါတယ်။သူတို့ အနောက်တိုင်း အခေါ် အဝေါ်ကတော့ မုံလာဥဖြူ ကျောက်တုံး တဲ့။ သင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။ ဘုရားပန်းအိုးကလေးလုပ်ပြီး ဘုရားလှူထားရရင် မကောင်းပေဘူးလား
အမေရိကဲန် ခရီးသွားDon Price(jr) ပြောတာက ကျွန်တော် အော်စတင် ဆိပ်ကမ်းကို ရောက်စဉ်က ရှုခင်းတွေအကြောင်း မိတ်ဆွေ တွေနဲ့ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ကြရာက Turnip Rock အကြောင်း ရောက်သွားတယ်ဗျ။ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အော်စတင် ဆိပ်ကမ်းကနေ မနက် ၃း၄၅ မိနစ်မှာ ကယပ်လှေတစင်းနဲ့ ထွက်လာလိုက်တာ နေရောင်မလာခင် ၄း၃၀မှာ ရောက်ပါရော။ကျွန်တော်ဗျာ နေရာတော်တော်များများ ရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ ။ဒီလောက် ဆန်းကျယ်လှပတဲ့ နေရာမျိုးကို မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။အံ့ဖွယ်ရှုခင်းပါပဲ။ တဲ့။
Multnomah Falls. Oregon
ဒါက အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကိုလံဘီယာ ဒေသ က ဂျော့ဂ်ျမြစ် နဘေး အော်ရီဂွန်ရေတံခွန်ကြီးလို့ပဲ ဆိုပါစို့။ကုန်းမြင့်ပိုင်း ရဲ့ ကိုလံဘီယာမြစ် သမိုင်းစဉ်တလျှောက် အရှိန်အ၀ါကြီးမား ကျော်ဇော လှတဲ့နေရာတွေပါ။
ပေအားဖြင့် 620 ft (189m)ရှည်လျားပြီး အော်ရီဂွန်ဒေသမှာတော့ အရှည်ဆုံး ရေတံခွန်ကြီးပေ့ါ့။World Waterfall Databaseအရ သိရှိရတာကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ၁၃၇ခုမြောက် အရှည်ဆုံးရေတံခွန်ကြီး စာရင်းဝင် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။United States forest Service က သစ်တောဝန်ထမ်းတွေကတော့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ဒုတိယမြောက် အရှည်ဆုံး ရေတံခွန်ကြီးပါ လို့ မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ တဲ့။
Norman die , France
နော်မန်ဒီ ကမ်းခြေက လှိုဏ်ပေါက် လို့ ပြောရမလား သဘာဝအလျှောက် ဖြစ်တည်ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ကျောက်ဆောင်ကြီးပါ။
နော်မန်ဒီကမ်းခြေကို သင်သိပါတယ်နော်။၁၉၄၄ခု ဇွန်လ ၆ရက် နေ့မှာ မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစုက နာဇီတွေကို နှင်ထုတ်ဖို့ နော်မန်ဒီကမ်းခြေကနေ အပြီးသတ် ထိုးစစ်ဆင် ကမ်းတက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ အောင်ပွဲ ရခဲ့တယ်လေ။
ပြင်သစ်တွေက လူလည်းလှသလို ရှုမျှော်ခင်းတွေကလည်း ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသကိုပဲ ကြည့်ကြည့် သိပ်လှသတဲ့။
နော်မန်ဒီဆိုတာက သိပ်လှတဲ့ နေရာပါ။ရှုခင်းရှုကွက်တွေက အံ့မခန်းပေါများတဲ့ ဒေသပေါ့။
Olymic National Park is located in the U.S State of Washington
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၀ါရှင်တန်ဒီစီ အတွင်း တည်ရှိနေတဲ့ အိုလံပစ်အမျိုးသားဥယျာဥင်္ကြီးပါ။နေ့စဉ် လူပေါင်း သောင်းကျော် ၀င်ရောက်နားနေ ခိုလှုံ အပန်းဖြေ ကြသတဲ့။ပြာလဲ့နေတဲ့ ရေကန်ကလေးရယ် စိမ်းမြမြ ပန်းခင်းကလေးမှာ အဖြူရောင် ဇာပန်းပွင့်ကလေးတွေရယ် ပြန့်ကြဲနေပုံက ကဗျာဆန်နေတယ်။ တိမ်တွေ ပြေးနေပုံက ညိုတိုတို ဖြူတူတူ တောင်ကြီးကို နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာနေသလိုလို။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တောင်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်က ချားလ်စတန် ပန်းခြံပါ။နှစ်သန်းနဲ့ချီ တည်ရှိလာတဲ့ သစ်ပင်ကြီးတွေဆိုတော့လှိုဏ်ဂူကြီးများသဖွယ် တည်ရှိနေပါတယ်။
(အသက်ကြီးလို့ ခါးကုန်းသွားတာများလားမသိ )
ဆန်းကျယ်လိုက်တာလို့ အံ့သြယူရမှာပါ။သဘာဝ ပန်းချီကားတချပ်ဟာ လူတွေ နတ်တွေ ဖန်ဆင်းတာထက် သာတယ်လို့ ဆိုရလိမ့်မယ်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက ပွန်ဂွါ ရေတံခွန်ကြီးပါ။ ဗုဒ္ဓရဟန်းတော်များ ရေကသိုဏ်းရှုတဲ့ နေရာတွေပေါ။့အဆင့် ဆင့် အထပ်ထပ် အလွှာ အလွှာ ရေတံခွန် များပေါ်မှာ ကျက်စားနေထိုင် ကျင့်ကြံအားထုတ်နေတာ တကယ့်ကို အားကျစရာကြီးပါပဲ။ဗီယက်နမ်ဟာ ကွန်မြူနစ် တွေ ကြီးစိုး သော်လည်း ဗုဒ
Ice Canyon ,Greenland
ဂရင်းလန်ကျွန်းက ရေခဲချောက်ကြီးပါ ။ တကယ့်ကို မီဂါ့မီဂါ ချောက်ကြီးပါဗျာ လို့ တက္ကသိုလ်သိပ္ပံဆရာကြီးတွေက တညီတညွှတ်တည်း အတည်ပြု ပြောကြားပါတယ်။
မိုင်အားဖြင့်၄၄၆၊ကီလိုမီတာအားဖြင့် ၇၅၀ကျော်ရှည်ပြီး အနက်က မီတာ ၈၀၀ (၂၆၀၀ပေ) အကျယ်က ၁၀ကီလိုမီတာ (၆မိုင်) ရှိပါသတဲ့။ Vပုံသဏ္ဍာန် နံရံများရှိပြီး အောက်ခြေ ပြားပြားမှာ လျိုချပ်မြောင်တွေ ထွင်းထုထားသလို ရေခဲတွေ မြှုပ်နှံထားသလို တွေ့နေရတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ သိပ္ပံဆရာကြီးများက ပြောဆိုပါတယ်။
Keukenhof Gardens, Netherland
ဟော်လန်နိုင်ငံ( နယ်သာလန်)က စပါယ်ရှယ် ဥယျာဥင်္ကြီးပါ ။ဟော်လန်အမျိုးသားတို့ရဲ့အမှတ်သင်္ကေတလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပန်းပွင့် ပန်းဖူး ပန်းငုံတွေ အစုအပြုံလိုက်
လှပစွာ မွန်းမံ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ကူကင်ဟော့ဖ် ပန်းခြံ လို့ ခေါ်ပါတယ်။
တောင်အာဖရိကအနီး အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာအတွင်းက မာဒဂါစကားကျွန်း ရှိ မိုရွန်ဒါဗါ မြို့တော်ဟာ အလှအပတွေ ပေါင်းစုထားတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံ ဖြစ်ပါသတဲ့။မိုရွန်ဒါဗါမြစ်ဝှမ်းဒေသ ဟာ UNESCO အဖွဲ့ က ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ် စံထားခဲ့တာပါ။ပုံမှာမြင်တွေ့ရသလို ဘယ်မှာမှ မမြင်တွေ့ရနိုင်တဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ အပင်တွေက ထူးထူးဆန်းဆန်း ရှင်သန် ဖြစ်ထွန်းနေတာပါ။မိုရွန်ဒါဗါ မြောက်ဘက် ကီလိုမီတာ ၁၅၀ကျယ်ဝန်းတဲ့ ဒေသမှာ တည်ရှိနေတာပါ။ကမ္ဘာကျော် ဂျိန်းဘွန်းရုပ်ရှင်ကားများ သွားရောက်ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ နေရာတွေပေါ့။
Cypress Gardens,Express Treem
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါပြည်နယ် winter Haven အနီး မှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်ကြီးပေါ့။ဆိုက်ပရပ် ပန်းခြံ ဆိုပါစို့။၁၉၃၆ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာပါ။ DickPope နဲ့ သူရဲ့ ဇနီး ဂျူလီတို့ က စိုက်ပျိုး ခဲ့တာပါ။နှစ်ပေါင်းများစွာ ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်ရဲ့ ဆွဲဆောင်နိုင်မှု အားအကောင်းဆုံး နေရာဒေသ တခုဖြစ်နေပါပြီ။ရေလွှာ နှင်းလျောစီးပြခန်းများနဲ့ နာမည်ကျော် လူကြိုက်အများဆုံး ပန်းခြံကြီးပါပဲ။
Refer: Top Dreamer Mag: 32 Wonderful places and Landscapes 0nly for your eyes
(Living Fashion Magazine, May, 2014)
နာမီကျွန်းကို ပျော်ပျော်ပါးပါး သွားကြမလား၊ ရထားကလေးနဲ့
Posted by PhyoPhyo at Monday, June 23, 2014 Labels: မေမေ့ရဲ့စာ
(Living Fashion Magazine, June, 2014)
Posted by PhyoPhyo at Friday, June 20, 2014 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး
၁၄ နှစ်ခန့်ကြာ ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံမှုတွေ၊ အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက် ချာလီချက်ပလင်ရဲ့အမှတ်တရ အခင်းအကျင်းတွေဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ အနားယူစရာနေရာရရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ ဟစ်တလာရဲ့ သရုပ်သကန်ကို သရော်ထားတဲ့The Great Dictator ၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြာရှည်ဆုံး၊ အပြင်းထန်ဆုံး နဲ့ အကျယ်ပြန့်ဆုံးပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးကပ် Great Depression ဇာတ်အိမ်တည်ထားတဲ့ Modern Times တို့လို ဂန္တဝင်ရုပ်ရှင်တွေပါ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး၊ သရုပ်ဆောင်၊ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်သရုပ်ဆောင် ချာလီချက်ပလင်ရဲ့ ဆွစ်ဇာလန်ကနေအိမ်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေ ပြုလုပ်နေခဲ့ပါပြီ။
သံလွင်စိမ်းဝါ ကမ်းခြေပြာပြာ ကော်ဖူးကျွန်းလေးမှာ ( ၁ )
Posted by PhyoPhyo at Friday, June 20, 2014 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး
ကျွန်မတို့ ခရီးသွားကြတယ်။ ပထမတော့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက၊ မိသားစုကိစ္စလေးတွေထဲက တခဏတာ ဆွဲထုတ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကပျောက်ဆုံးသွားအောင် သွားသွားလာလာ ကုစားဖို့ပါ။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပျောက်ဆုံးသွားအောင် ဖြေလျော့လွှတ်ချပေးလိုက်တာ။ နောက်ထပ် ခရီးတွေသွားကြပြန်တယ်။ နောက်ထပ် နောက်ထပ်ခရီးတွေမှာတော့ ကျွန်မတို့ ကိုယ့်ဘာသာပြန်ရှာကြည့်ချင်လာကြပြီ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ စိတ်နှလုံး၊ မျက်စိ၊ နား အားလုံးဖွင့်လှစ်ထားလိုက်ပြီး ကမ္ဘာကြီးထဲက မွေးရပ်ဇာတိမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဘယ်လောက်အထိ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်စီးမျောနိုင်မလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိလေ့လာစူးစမ်းနိုင်မလဲ။ သတင်းတွေထဲမှာ၊ ဓာတ်ပုံတွေမှာ ညွှန်းဆိုဖွဲ့နွဲ့ပြနေသလို တကယ်ပဲ အဲဒီလိုနေရာတွေလားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မြင်သိ ခံစားကြည့်ချင်လာတဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ခရီးသွားလာကြတာပါ။ အားလပ်ရက်နွေရာသီကာလတွေဟာ သွားသွားလာလာခရီးစဉ်လေးတွေစီစဉ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်လေးတွေပါပဲ။
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 17, 2014 Labels: အထွေထွေမှတ်စု
FIFA World Cup တိုင်း မှာ ၁၉၆၆ခုနှစ်ကနေစပြီး အဆောင်ရုပ်(mascot)လေးတွေရှိကြတယ်၊ World cup Willie က ပထမဆုံးလာဘ်ကောင်အဆောင်ရုပ်လေးပါ၊
အဆောင်ရုပ်လေးတွေကို အိမ်ရှင်နိုင်ငံရဲ့ရိုးရာအ၀တ်အစား၊ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုပန်း၊ နိုင်ငံအထိမ်းအမှတ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ကိုယ်စားပြုဒီဇိုင်းရေးဆွဲကြပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 17, 2014 Labels: စုမီအောင်ရဲ့စာ, အက်ဆေး
လူသားတို့ကို ကိုယ်စားပြုသည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်များ ရောက်တိုင်း၊ လတစ်လ၏ နေ့မြတ်များတွင် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် ထိုနေ့၏ အထိမ်းအမှတ်ပွဲများမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲရလေတိုင်း ကျွန်မ ပျော်ရွှင်တတ်သည်။ ဂျပ်ဆင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ထိုသို့သော နေ့ထူးနေ့မြတ် များ ဥပမာ မိခင်များနေ့(Mothers’ Day), ဖခင်များနေ့(Fathers’ Day)၊ မုဆိုးမများနေ့ (Widows Day)၊ ကလေးသူငယ်များနေ့ (International Children’s Day)၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနေ့(Aged Day or International Day of Older Persons) အစရှိသဖြင့် အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ မေလ၏ ဒုတိယတနင်္ဂနွေမှာ မိခင်များနေ့ကို ထူးထူးခြားခြားပြုလုပ်ခဲ့သလို လာမည့်ဇွန်လ၏ တတိယတနင်္ဂနွေမှာ ဖခင်များနေ့ကို ထူးခြားစွာပြုလုပ်ကြဦးမည်။ ယခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြုလုပ်မည့် ဖခင်များနေ့မှာတော့ ကျွန်မ မည်သို့မျှ ပျော်ရွှင်နိုင်မည်မဟုတ်တော့ပါ။ ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာက ဖေဖေကွယ်လွန်ခဲ့လို့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။
ဖေဖေ့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်လျှင် ဇာတိပျဉ်းမနားမြို့လေး၏ လသာသာညများနှင့် ရန်ကုန်ကန်တော်ကြီးမျှော်စင်ကျွန်းတွင် စနေနေ့ ညများမှာ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် Undergurond Music Show များကို အထူးပင် ကျွန်မသတိရမိသည်။ သတိရစရာများ အပုံအပင် များပြားစွာရှိခဲ့သော်လည်း သူများဖခင်များ မလုပ်နိုင်သည့်ကိစ္စများကို ကျွန်မတို့အတွက်လုပ်ပေးခဲ့သည့်အဖြစ်များက ကျွန်မအား သတိရစိတ် ပိုကဲစေပါသည်။
အိမ်ရှေ့အုတ်ခုံမှာ ကျွန်မတို့မောင်နှမတစ်တွေ ဂစ်တာတီး၊ သီချင်းဆိုကြသည်ကို ဖေဖေသည် ပက်လက်ကုလားထိုင် တစ်လုံး တွင်ထိုင်ကာ ပြုံးပြုံးကြီးနားထောင်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်မတို့မောပန်းသွားလျှင်တော့ ဖေဖေသည် သူ့ဘ၀အတိတ်အကြောင်း များကို ဖွဲ့သီကာပြောပြတော့သည်။ ဖေဖေငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘများ ဆုံးပါးခဲ့သဖြင့် ၊မင်းကတော်ကြီးဒေါ်ပန်းရီ (`မင်းကတော်ကြီးငါးမုန့်´ဟု ငါးမုန့်လုပ်ငန်းလုပ်သည့်အဒေါ်) က ဖေဖေတို့မောင်နှမများအားလုံးကို သူ့သားသမီးအရင်းများနှယ်မွေးစားခဲ့သည်။ ဖေဖေ့အဒေါ်ကို အားလုံးက `မာမီကြီး´ဟုခေါ်ကြသည်။ ဖေဖေ့ပြောပြချက်အရ ငွေကုန်ကျစရိတ်နည်းအောင် သားအရင်းများကဲ့သို့ဘောင်းဘီရှည် မဆင်ဘဲ ဖေဖေ့ကို ဘောင်းဘီတိုများသည် ဆင်ခဲ့သည်ဟု သိရစဉ်က ဖေဖေ့အတွက် ငယ်စိတ်နှင့်စိတ်တိုဒေါသထွက်ကာ မခံ မရပ်နိုင် ဖြစ်မိခဲ့သေးသော်လည်း ကြီးပြင်းလာချိန်မှာတော့ အရာရာကို ကျွန်မ နားလည်ခဲ့ပါသည်။ ဖေဖေ့ အဒေါ်မှာ သူ့သားသမီးအရင်းများ များပြားလှသည့်အထဲ ဖေဖေတို့မောင်နှမငါးယောက်ကိုပါ ပြုစုရသဖြင့် လစ်ဟာချက်များရှိနိုင်ပါသည်။
ငယ်စဉ်က သားအရင်းများနှင့် တန်းတူခံစားခွင့်မရှိခဲ့အတွက် ကျောင်းစာမှာပိုပြီးထူးချွန်အောင်ကြိုးစားခဲ့သလို ငါးမုန့်များလုပ် ရာမှာ ဖြစ်စေ၊ အခြားအိမ် အလုပ်များမှာဖြစ်စေ၊ တစ်အိမ်လုံးရှိသမျှအလုပ်များကို တတ်နိုင်သည်ထက်ပိုအားစိုက်လျက် များစွာ အားထုတ် လုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သည်ဟုသိရသည့်အခါ ဖေဖေ့စိတ်ဓာတ်ကို ကျွန်မများစွာအားကျခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆောင်မှာ၊ အိမ်မှာ မည်သည့် နေရာမျိုး မှာ နေထိုင်ရသည်ဖြစ်စေ ကျွန်မသည်လည်း မျက်လုံးကမြင်တွေ့မိသည့်အလုပ်ကို ရှောင်လွှဲမသွားဘဲ လက် က ချက်ချင်း လုပ်ဆောင်တတ်သည့် အကျင့်တစ်ခု မသိမသာ ရလာခဲ့ပါသည်။ သည့်အတွက် စဉ်းစားမိတိုင်း ဖေဖေ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဖေဖေက သူ့ခံစားချက်များပြောပြပြီးတိုင်း “ အင်း.. ဘာပဲပြောပြော မာမီကြီးကျေးဇူးတွေအများကြီးပဲ၊ အဖေကအကုန်လုပ်ပေး တော့ မာမီကြီးက အရေးအကြောင်းရှိရင် အဖေ့ကိုပဲအားကိုးတယ်၊ ချစ်လည်းချစ်ရှာတယ်”ဟုပြောလေ့ရှိသည်။
ဖေဖေသည် အိမ်မှာပဲ ဆေးခန်းဖွင့်ထားခဲ့သည်။ Leprosy Inspectorဖြစ်ရာ အရေပြားပေါ်ဖြစ်ပျက်သမျှ အသေးဆုံးမှစကာ အကြီးမားဆုံးပြဿနာထိ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။ ဖေဖေ့ဆီလာသမျှလူနာအများစုမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြသဖြင့် ဖေဖေသည် ဆေးထိုးခ မယူပါ။ အခြေခံဆေးဝါးကုန်ကျငွေမျှသာ လျှော့ပေါ့ယူလေ့ရှိသည်။ ကျေးရွာများသို့ Medical Check-up Tour သွားတိုင်း ကျွန်မတို့ လိုက်သွားလေ့ရှိသည်။ လူနာများအပေါ်ထားသည့် ဖေဖေ့၏ကြီးမြတ်လှသည့် ကရုဏာကို ကျွန်မအလွန်အမင်းအံ့အားသင့် လျက် နားမလည်နိုင်အောင်လည်း ဖြစ်ခဲ့ရဖူးသည်။ လက်ချောင်း ခြေချောင်းများတိုဝင် လျက်၊ နားရွက်များနှာခေါင်းများ ပုံပျက်ထူအမ်း နေသည့် အနာကြီးရောဂါသည်များကို အနီးကပ်ကိုင်တွယ်၊ ဆေးထိုး၊ ဆေးဝါး ကျွေးပြီးလျှင် သူတို့က ကျွေးမွေးသည့် အစားအစာများ ကိုလည်း အားပါးတရစားသုံးလေ့ရှိပါသည်။ ကျွန်မကတော့ အိပ်မက်ထဲပင် ထည့်မက်၊ ကြောက်လန့်၊ ယောင်ရမ်းအော်ဟစ် နိုးထတတ် သည်အထိ ဖေဖေ့လူနာများကို ရွံရှာကြောက်လန့်ခဲ့မိပါသည်။ သို့သော် ဖေဖေ့နောက်သို့ မလိုက်ဘဲ ကျွန်မ မနေနိုင်ပါ။
အစိုးရက ဖေဖေ့အား လင့်ရိုဗာကားတစ်စီးပေးထားစဉ်က ဖေဖေကိုယ်တိုင်မောင်းသည့်ကားပေါ်မှာ ကျွန်မ တို့ အားလုံး လိုက်လေ့ ရှိပါသည်။ ဆိုင်ကယ်နှင့်သွားမည်ဆိုလျှင် တစ်ယောက်သာခေါ်နိုင်သည့်အတွက်`ဘယ်သူလိုက်မလဲ´ဟု ဖေဖေ မေးတိုင်း ကျွန်မကအရင်ဆုံးဆိုင်ကယ်နောက် လုတက်ကာ လိုက်လေ့ရှိပါသည်။ အပြင်သို့ထွက်တိုင်း ဖေဖေ့အကျင့်တစ်ခုကို ကျွန်မ နားမလည် အောင်ဖြစ်ရတတ်သည်။ ဖေဖေသည် လမ်းတစ်လျှောက် ကွမ်းယာဆိုင်လေးများတွေ့သည်နှင့် မောင်းလက်စ ကား/ ဆိုင်ကယ်ကို ထိုးရပ်ကာ ဆေးရွက်ကြီး လက်မခန့် ခပ်သေးသေးအပိုင်းအစလေး ဖဲ့ပေးရန် တောင်းခံလျက် ခြေလုံးပြီး ပါးစောင်တွင်ခဲငုံထားလေ့ ရှိသည်။ မေမေက ထိုအကျင့် ပျောက်စေရန် ဆေးရွက်ကြီးများဝယ်၊ ဖဲ့ကာ ဘူးကလေးနှင့်ထည့်ပေးပြီး ဆောင်ထားရန်ပေးသော်လည်း ဖေဖေသည် ဘူးကလေးပါလျှင်တောင်မှ ထိုအကျင့်ကိုပြုမြဲပင်။ ဆေးရွက်ငုံရန် အဓိကမဟုတ်ဘဲ လမ်းဘေးကလူများနှင့် စကားဆို မိတ်ဆွေဖြစ်လိုစိတ်ကြောင့် ပြုခြင်းဖြစ်သည်ကို ကျွန်မ ကြီးပြင်းလာသည့်အခါ နားလည်ခဲ့သဖြင့် ယခုအခါ လမ်းဘေးကွမ်းယာဆိုင် လေးများမှာ တစ်ရှူထုပ်ဝယ်လေတိုင်း ဖေဖေ့၏ထိုအကျင့်နှင့်အတူ ဖေဖေ့ကို သတိရစိတ်က ကျွန်မကို မျက်ရည်စို့စေပါသည်။ ဖေဖေမရှိသည့်အခါကျမှ ဖေဖေ ဦးစားပေး ရွေးနုတ် ပေါင်းသင်းခဲ့သည့် လမ်းဘေးကွမ်းယာဆိုင်ကလူ၊ လမ်းဘေးလက်ဖက်ရည်ဆိုင် ကလူ၊ လမ်းဘေး ဟင်းရွက်ကန်စွန်းရောင်း သည့်လူ..ဆိုရလျှင် လမ်းဘေးကလူများ..သည်လူများကို လှည့်ကြည့်စကားဆို မိတ်ဖွဲ့ ပေါင်းသင်းရန် ကျွန်မ သတိရတတ်ခဲ့ပေပြီ။
ယခုအခါ အလုပ်တိုက်သို့လာတိုင်း လမ်းထောင့်ကွမ်းယာဆိုင်က မိန်းကလေးကို တစ်ရှူးတစ်ထုပ်ဝယ်ယူလျက် စကားစမြည် လေးများ ဆိုပြောမိသည်မှာ ဖေဖေ့အားသတိရစိတ်ကြောင့် ဖြစ်မည်လား။ ဤသို့ ဖေဖေ့အားသတိရစိတ်ဖြင့် ပြုမိသည်များ ရှိသကဲ့သို့ အလွန်အမင်း သတိရမိမည်ကိုစိုးသဖြင့် မသွားမိရန် ရှောင်တိမ်းနေသည့်နေရာများလည်း ရှိနေပြန်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်စိတ်များ မည်သည့် ကာလထိ၊ မည်မျှအားကောင်းဖွဲ့တည်နေမည်ကို ကျွန်မ မသိတော့ပါ။
ရန်ကုန်၊ ကျောက်မြောင်းမှာ နေဖြစ်ကြသည့်အခါ ကန်တော်ကြီး၊မျှော်စင်ကျွန်းတွင်လုပ်သည့် Underground Music Show များသို့ လမ်းလျှောက်လျက်တစ်ဖုံ၊ ဆိုက်ကားသုံးယောက်တက်စီးလျက်တစ်ခါ၊ ဖေဖေ၊ ညီမလေး၊ ကျွန်မတို့သုံးယောက် သွားကြည့်လေ့ ရှိသည့်အချိန်များကို ကျွန်မအလွန်အမင်း လွမ်းဆွတ်သတိရမိပါသည်။ လူငယ်တို့စိတ်ကြိုက် အော်ဟစ်ပေါက်ကွဲ တီးခတ်ဟစ်ဆိုလေ့ရှိ သည့် ထိုဂီတပွဲများကို အသက် ၇၀ပြည့်လုဖခင်တစ်ဦးက သမီးများနှင့်အတူလိုက်ပါကြည့်သည်ဆိုခြင်းက အိမ်နီးချင်းများအတွက် အထူးအဆန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းများက `ဘာလို့ နင့်အဖေ ခေါ်မှာလဲ၊ ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့၊ လွတ်လွတ် လပ်လပ်သွားကြည့် ရအောင်´ ဟု ပြောသော်လည်း ကျွန်မတို့စိတ်ထဲ အဖေနှင့်သွားရသည်က လုံခြုံမှုရှိသည်နှင့်အမျှ ပိုပြီး လွတ်လပ် ပျော်ရွင်မှုရှိသည်ဟု ခံစားရသည်။ ဖေဖေက ရှေ့မတိုးနဲ့၊ နောက်နားမှာနေ၊ ဟိုလိုနေ၊ သည်လိုကြည့် တားမြစ်လေ့မရှိပါ။ သူကိုယ်တိုင်ပင် သမီးနှစ်ယောက် လက်ဆွဲကာ အကျီချွတ် ဝှေ့ယမ်းအော်ဟစ်ကခုန်နေသည့် ကြမ်းကြမ်းဟော့ဟော့ လူငယ်တွေကြား ပျော်ပျော်ကြီး တိုးဝင်ကြည့်တတ် သည်။ ယခုနောက်ပိုင်း မျှော်စင်ကျွန်းကMusic Showများကို ကျွန်မ သွားမကြည့်ဖြစ်တော့ပါ။ ဖေဖေ့အားသတိရ စိတ် ထူးကဲပေါ် ထွက်ကာ ပျော်ရွှင်ကခုန်နေသည့်လူအများကြား ကျွန်မ သည်းထန်စွာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ငိုကြွေးမိမှာ သေချာပါသည်။ ယခုပင်လျှင် စာရေးနေလျက် မျက်ရည်များ ပါးပေါ်သို့တိတ်တဆိတ်လိမ့်ဆင်းကျနေပါသည်။
အသက်၈၅နှစ်အရွယ် ကွယ်လွန်သူတို့၏နာရေးကြော်ငြာများကို မြင်ရတိုင်းမှာလည်း ကျွန်မ အမှန်ပင်စိတ်ထဲ ကြေကွဲမိပါ သည်။ ဧပြီ ၂၃၊ ယုဒသန်ခန်းမတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဦးဝင်းတင်ဂါရ၀ပြုအခမ်းအနားရောက်ခဲ့စဉ်ကတစ်ကြိမ်၊ ဘူတာကြီး၊ သာသနာ့ဟိတ ဓမ္မာရုံတွင် မေ ၂၅ ကပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဆရာမြသန်းတင့် ၈၅နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုဖတ်ကြားခြင်းမှာတစ်ကြိမ်၊ သေဆုံးခြင်း နှင့်အတူ ၈၅ ဆိုသည့်ဂဏန်းတစ်လုံးက ကျွန်မအတွက် ထိခိုက်ဝမ်းနည်းစရာ တိုက်ဆိုင်မှု ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဆရာမမြူမြူက `သုခမြို့တော်၊ ဟာစရိပါး နှင့် ကျွန်မဖေဖေ´ဟု မျက်ရည်တစ်ဝက်စွက်လျက်ဖတ်လျှင် သုခမြို့တော်ထဲက နူနာစွဲလူဆင်းရဲတို့၏ပုံရိပ်များနှင့်အတူ ကျွန်မငယ်စဉ်က အနီးဆုံးမှာမြင်ခဲ့ရသည့် ဖေဖေ့လူနာ အနာကြီးရောဂါသည်များ…ပြီးတော့ ထိုလူဆင်းရဲများကိုမှ တရင်းတနှီး ရွေးနုတ် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ နေထိုင်ခဲ့သည့် ဖေဖေ့၏ ကရုဏာကြီးမြတ်မှု၊ လူသားဆန်သည့်နေထိုင်မှု၊ တာဝန်ကျေမှု၊ ပုံရိပ်အစုစုတို့ကို တမ်းတမြင်ယောင်ကာ ကျွန်မ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပြီ။
ဖေဖေမရှိတော့ပြီ ဆိုသည့်အသိက ယခုနှစ်၊ ဇွန်လတတိယတနင်္ဂနွေတွင်ပြုလုပ်မည့် ဖခင်များနေ့မှာ မည်သည့်ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆင်နွှဲရမှန်း မသိအောင် ကျွန်မအား ကြိုတင်ခြောက်လှန့်နေပါပြီ။ ယခင့်ယခင်နှစ်များက ဂျပ်ဆင်ဘုရားကျောင်းတွင်ပြုလုပ်သည့် ဖခင်များနေ့ အခမ်းအနားများမှာ ကျွန်မ အင်မတန်မှ ပျော်ရွှင်ခဲ့သည်။ ထိုအခမ်းအနားများမှာ ဖခင်နှင့်ပတ်သက်သည့် `သက်သေခံချက်´(Testimony)၀န်ခံပြောဆိုခြင်း၊ ဖခင်အားရည်စူးရေးသားသည့် စာ၊ ကဗျာတစ်ပုဒ် ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ ဖခင်ဂုဏ်ပြုတေး သီချင်း သီဆိုခြင်း၊ ပက်ကင်လှလှထုပ်ပိုးထားသည့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးများကို တက်ရောက်လာကြသည့် ဖခင်များထံ လက်ထဲ အရောက် လိုက်လံပေးဝေခြင်း စသဖြင့် နှစ်စဉ် ပျော်ရွှင်မြူးထူးစွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲရလေ့ရှိသည်။ ဖေဖေကလည်း သူရန်ကုန်မှာရှိလျှင် ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့သလို၊ ပျဉ်းမနားမှာရှိနေလျှင်လည်း ကျွန်မက ထိုနေ့မှာပေးဝေသည့် လက်ဆောင်ထုပ်လေးကို သိမ်းယူကာ ကျွန်မသီးသန့်ပေးလိုသည့် လက်ဆောင်များနှင့်အတူ ပါဆယ်ထုပ်ကာ ကားဂိတ်မှတစ်ဆင့် ပို့ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ယခုနှစ်မှာ ကျွန်မ မည်သို့မည်ပုံ ဖြတ်သန်းရမည်ကို ကျွန်မအမှန်ပင် မသိတော့ပါ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဖေဖေမရှိတော့သည့် ဖခင်များနေ့မှာ `ဖခင်များအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေ၊ သားသမီးများကလည်း ဖခင်တို့ထံမှ ကြီးမြတ်သည့်အမူအကျင့်များကို ကမ်းယူဆင့်ပွားနိုင်ပါစေ´ဟု ကျွန်မ ဆုတောင်းလိုက်ပါသည်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း ကျန်ရှိသည့် အသက်ဘ၀နေ့ရက်များမှာ ဖေဖေ့ကဲ့သို့ လူသားဆန်စွာ နေထိုင်သွားနိုင်ရပါလိမ့်မည်။
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, June 04, 2014 Labels: Myanmar Knowledge Society, အကူးအပြောင်းကာလ တရားမျှတမှု
Myanmar Knowledge Society (MKS) မှ ထုတ်ဝေတဲ့ အကူးအပြောင်းကာလတရားမျှတမှု (Transitional Justice) မှာ ကျမ ရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Hungary အပိုင်းပါ။ အရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့အကူးအပြောင်းကာလတရားမျှတမှုကို လေ့လာသုံးသပ်ထားတဲ့စာအုပ်ပါ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာမို့ တခြားအရှေ့ဥရောပနိုင်ငံတွေအကြောင်းပါ ဖတ်ချင်ရင် စာအုပ်ဝယ်ဖတ်ကြည့်ပါနော်။
ကမ္ဘာကြီးပေါ်က ထူးထူးဆန်းဆန်း အဆောက်အဦ ကြီးတွေ
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, June 03, 2014 Labels: ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး, မေမေ့ရဲ့စာ
1. Stone House, Portugal
မီးခတ်ကျောက်နဲ့ ဆင်ဆင်တူတဲ့ ကျောက်ကို အသုံးပြု တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပေါ်တူဂီက ကျောက်တုံးအိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွန်လက်ရာမြောက်တဲ့ ပိသုကာ ဆရာကြီးများက မကြာခဏ လာရောက် တိုက်ခိုက်လေ့ရှိတဲ့ ဂျာမန်လူရိုင်းများရဲ့ ရန်က ကာကွယ်ဖို့ အိမ်ကို ကျောက်တုံးတွေကြား လုံလုံခြုံခြုံ လက်စွမ်းပြ တည်ဆောက် သိမ်းဆည်း ထုဆစ်ထားဟန်ရှိတယ်။ ကျည်ဆန်တွေရဲ့ ဒါဏ်က ခံနိုင်ရည်ရှိစေတဲ့ ပြတင်းတံခါးတွေရယ် ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ စတီး လူဝင်တံခါးတွေရယ် ပါရှိနေပြန်တယ်။
ကောင်းကင်ဘုံတံခါးဝသို့ မျှော်ကြည့် ချိတ်ဆွဲထားသော ဘေဘီလုံ ဥယျာဉ်ကြီးများ
နတ်ဘုရားတို့ ဖန်ဆင်းလိုက်သလိုပါပဲ။တကယ့်ကို ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် တိုက်တာအိမ်ခြေ ခေါင်မိုးတွေပေါ်က သစ်ပင် ပန်းမာလ် ဥယျာဉ်ခြံကြီးများဟာ လေမှာဝဲပျံနေသလို အထူးအဆန်း မြင်တွေ့နေရတာကြောင့် Hanging Gardens ရယ်လို့ တွင်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ် ။ ကောင်းကင်ဘုံတံခါးဝသို့ မျှော်ကြည့် ချိတ်ဆွဲထားသည့်ဥယျာဉ်ပျံကြီးများ လို့ ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။ဘေဘီလုံ (Babylon) ဆိုတာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကိုက (Gate of the Gods)”ဘုရားသခင်ရဲ့ တံခါးဝများ” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတာပါ။
၁၆ ရာစုနှစ်က ဒပ်ခ်ျလူမျိုး အနုပညာရှင် မာတင် ဗင် ဟီးမ်ဆကရက်ခ် က နောက်ခံ (Babel Tower ) ဘာဘယ်မျှော်စင်နှင့်အတူ ဥယျာဉ်ပျံကြီးများကို ထူးခြားစွာ ရုပ်လုံးဖေါ်မှတ်တမ်းတင် ရေးသားခဲ့တယ် တဲ့။
နေရာကတော့ ယခုအခါ အီရတ်နိုင်ငံ ဟီးလပ် ဘာဘီလ်(Hillah,Babil)ပြည်နယ်မှာပါ။ ရှေးဟောင်း ဘေဘီလုံမြိုံတော်ကြီးမှာ ဖြစ်ပါတယ် လို့ ဘေဘီလုံနီယဲန်လူမျိုး ဘုန်းတော်ကြီး ဘရော့ဆပ်စ် (Berossus) က 290BC မှာ ပထမ ဦးစွာ ထုတ်ဖေါ် ရေးသားထားကြောင်းဂျို့စ် ဖါ့စ် (Jose Phus)ဆိုသူ သုတေသီတဦးက ကောက်နှုတ်ဖေါ်ပြခဲ့တယ်။ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် ခုနှစ်မျိုးမှာ တခုအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။တကယ့်ကို ထူးထွေတည့် အံ့ရာ လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတို့ တည်ဆောက်ခဲ့သမျှ ထဲမှာ ဒါဟာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် အံ့သြ ချီးမွမ်းဖွယ် ကောင်းသော အစီအမံ ဖြစ်တယ်လို့(The Marvel of the Mandkind ) ဆိုပြီးတော့လည်း နာမည်ကျော်လာခဲ့တာပါ။
Hanging Gardens of Babylon, 20th-century interpretation
၂၀ရာစုနှစ်က ဘေဘီလုံ ဥယျာဉ်ပျံကြီးများ
ဒါ့ကြောင့်လည်း ရှေး ရောမ နဲ့ ဂရိ (ခေါမ သို့မဟုတ် မက်ဆီဒိုးနီးယဲန်) စာရေးဆရာ Strabo,Diodorus Sircutusနဲ့ Quintus Curtius Rufus တို့က ဒါဟာ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်လွန်းတဲ့ အရှေ့တိုင်း ဥယျာဉ်တခုလို့ ဆိုပါတယ်။ ရေသွယ်မြောင်းတွေလည်း မလစ်လပ်ရပါဘူး။
၁၄၉၈ ကနေ ၁၅၇၄အထိ ထွန်းကားခဲ့တဲ့ စာရေးဆရာ မာတင် ဗင် ဟီးမ်စကပ်ခ် က ၁၅၇၂ခုနှစ်မှာ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင် ဆန်လွန်းလှတယ်လို့ ထုတ်ဖေါ်ရေးသားခဲ့တယ်။
တကယ့်ကိုပဲ ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် တည်ရှိနေတာပါ။ သက္ကရာဇ် 605 -528BC အတွင်း ဘေဘီလုံ မြို့တော်ကြီးကို ထီးနန်းစိုက်ထူ ဧကရာဇ်တဆူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘုရင် Nebuchadnezzar II က အိမ်ယာတောတောင်နဲ့ ခွဲခွာလာရတဲ့အတွက် ဋ္ဌာနီကို အောက်မေ့ လွမ်းဆွတ်တော်မူနေသူ ပါရှန်မိဖုရား Queen Amytis အတွက် ရွှေနန်းဆောင်တခုနဲ့အတူ ဒီ ထူးခြား ဆန်းပြားတဲ့ ဥယျာဉ်ပျံကြီးများကို တွဲဘက်ပြီး အလွမ်းပြေ တည်ဆောက်ပေးခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
နှစ်ပြည်ထောင် ချစ်ကြည်ရေး မိတ်ဆက် လက်ထပ်ရတာမျိုး ရှိလေတော့ မက်ဆီ ဒိုးနီးယဲန်မိဖုရား အတွက် သို့မဟုတ် ပါရှဲန်မိဖုရားအတွက် ဆိုတာ သဲသဲကွဲကွဲမရှိဘူး လို့ တချို့ သုတေသီတို့က အငြင်းပွားဖွယ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ ဟီရို ဒိုးတပ်စ် (Herodotus)ကတော့ သူ့သမိုင်းစာအုပ်မှာ ဒီအကြောင်း နီးနီးကပ်ကပ် ထဲထဲဝင်ဝင် ရေးသားခဲ့တာမျိုး မရှိပါဘူး တဲ့။
တချို့ကလည်း အဆီးရီးယဲန်ဘုရင် Assyrian Sonnacherib(704- 681BC)က တိုက်ဂရစ်မြစ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ မြို့တော်ကြီး Nineveh မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပြန်တယ်။
This copy ofabas relief from the North Palace of Ashurbanipal (669–631 BC) at Nineveh showsaluxurious garden watered by an aqueduct.
နောက်တမျိုး ပြောကြတာက ဒီမျှ ခန်းနားထည်ဝါလွန်းတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီး ကို တည်ဆောက်ခဲ့သူဟာ King Ashurbanipal(669-631BC)ဖြစ်တယ်။ ရေသွယ်မြောင်း စုံစုံလင်လင် ပါဝင်တာကြောင့် ဘာမှ လိုလေသေးမရှိပါဘူးတဲ့။
ဒီလို အငြင်းပွားဖွယ် ပြောဆိုနေကြခြင်းဟာ ခေတ်ပြိုင် စာရေးဆရာကြီးတွေရဲ့ ဖန်တီးမှုလည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိနေ ပါသေးတယ်။
ယခုအခါမှာတော့ ယူဖရေးတီးစ်မြစ် (Euphrates)အောက်ခြေမှာ တည်ရှိနေတာဖြစ်တယ် ဘေဘီလုံမှာ ရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဆိုကြပြန်တော့ ယခုအခါ တည်ငြိမ်းအေးချမ်းမှု မရှိတဲ့ အီရတ်နိုင်ငံမှာ ပြန်လည် တူးဖေါ်ကြည့်ရှုဖို့ဆိုတာ အလွန်တရာမှ ခက်ခဲလွန်းနေပါတယ်။
နန်းတော်ကြီးကတော့ နိဗ္ဗာန်ဘုံတမျှ ခန်းနားထည်ဝါလွန်းပါတယ်။ ဥယျာဉ်တွေက တွဲလဲ ချိတ်ဆွဲ ထားသလို ပါပဲ။လျှောက်လမ်းတွေဟာ တဖြည်းဖြည်း ထောင်မတ်ပြီး ကျောက်တိုင်ကြီးတွေနဲ့ အခိုင်အခန့် စီချယ်ကာရံ ဆောက်လုပ်ထားပြီး သစ်ပင်မျိုးစုံ ပေါင်းထည့်ဖြည့်စွက်ထားတာကြောင့် တောတောင်ရှုခင်းတခုလုံး မ,ယူရွှေ့ပြောင်း စိုက်ထူ ထားရော့လား အထင်မှားနိုင်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင် တတောလုံး တတောင်လုံး (ရွှေနန်းတော်ကြီးတခုလုံး)စိမ်းစို ညိုမှိုင်းလို့။တဆင့်ပြီးတဆင့် တောင်ကုန်းကလေးပေါ်ဆင်ခြေလျော မြင့်တက်သွားရာမှာ တောရိုင်းနှင်းဆီတွေလည်း ခြံရံ ဖြာဝေလို့ပေါ့။ပန်းဝတ်ရုံ ခြုံထည် ဖြန့်ခင်းလိုက်သလို တလောကလုံး စိုပြည်တင့်တယ်လို့။ကွေ့ကောက် ပတ်ရစ် မြင့်တက်သွားတဲ့ ပန်းခြုံနွယ် တောတန်းကလေးက လှပါဘိ သနဲ့။
ဒါဟာ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း ဝေးခဲ့ရသူ ဌာနီကို လွမ်းတပူဆွေးနေသူ ပါရှဲန် မိဖုရား ကျေနပ် နှစ်ချိုက်စေဖို့ အထူးပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ ဧကရာဇ်ဘုရင်ကြီးရဲ့ စေတနာပါပဲ။ ရှေးပိသုကာအတတ်ပညာရဲ့ ပြောင်မြာက်မှုကို မလွဲမသွေ အံ့သြ ချီးမွမ်းရမှာ ဖြစ်တယ်။
ကောင်းကင်ဘုံတံခါးဝသို့ မျှော်ကြည့် ချိတ်ဆွဲထားသော ...
သံလွင်စိမ်းဝါ ကမ်းခြေပြာပြာ ကော်ဖူးကျွန်းလေးမှာ ( ...
နာမီကျွန်းကို ပျော်ပျော်ပါးပါး သွားကြမလား၊ ရထားကလေ...